Daaweynta Jirka, Shaqada, iyo Hadalka - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Faa'iidooyinka Qorshaha Medicare > Daaweynta Jirka, Shaqada, iyo Hadalka
Daboolida daaweynta bukaan -socodka
Markaan sii gabowno, waxaa laga yaabaa inaan horumarino baahiyo kala duwan ee caafimaadka jirka iyo garashada. Waxaan bixinaa daboolida daaweynta jirka, shaqada, iyo hadalka oo dhan ee xubnaha Qorshaha Medicare Advantage (MA).
Faa'iidooyinka Daaweynta Bukaan -socodka
Gargaarka daaweynta bukaan -socodka bukaan -socodka ee CHPW MA Qorshaha waxaa ka mid ah caymiska:
Xusuusin: Dhammaan Qorshayaasha CHPW MA waxay kaloo bixiyaan caymis bukaan -jiifka daaweynta jirka, hadalka, iyo shaqada. Iyada oo ku xidhan qorshahaaga, waxaa laga yaabaa inaad leedahay lacag -bixin ama caymis. Faahfaahinta ka eeg Caddaynta Daboolista qorshahaaga.
Faa'iidooyinka Daaweynta Bukaan -socodka ee Qorshaha Faa'idada Medicare (MA)
Daaweynta jirka, shaqada, iyo hadalka, booqasho kasta
MA Laba Qorshe (HMO SNP) $ 0 ilaa 20% lacagta caymiska
Qorshaha MA 1 (HMO) $ 40 doollar
Qorshaha MA 3 (HMO) $ 30 doollar
2021 Faa'iidooyinka Daaweynta Bukaan -socodka Qorshe ahaan
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 23, 2021